“ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သူ့ ယောင်္ကျား မိုက်ကယ်လ် ဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ဘူးတဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်း ” – Amara News
“ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သူ့ ယောင်္ကျား မိုက်ကယ်လ် ဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ဘူးတဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်း ”
“စုရေ ပြန်လာခဲ့ပါလား ” ဆိုတဲ့စကားကို မိုက်ကယ်လ် ဟာ ဘယ်တော့မှာ မပြောခဲ့ဘူးတဲ့။အဲ့ ဒီအစား “ကိုလာမယ် ၊ ကိုယ်စုဆီလာမယ်။ကိုစု နဲ့တွေချင်တယ် ” ဖုန်းရတိုင်း ၊ စာရေးတိုင်းမှာ ပြောခဲ့သတဲ့။မိုက်ကယ်လ် ဟာ ကင်ဆာဖြစ်ပီး အခြေအနေမကောင်းတော့တဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်ထိအောင်မြန်မာနိုင်ငံကို ၊ အကျယ်ချုပ်ကျနေတဲ့ စုဆီကို လာဖို့ Visa လျှောက်ခဲ့တယ်။
အကြိမ် ၃၀ တိတိ ထိ လျှောက်ခဲ့ပေမယ့် မြန်မာအစိုးရက ပယ်ချခဲ့တယ်။ဗီဇာပေးဖို့ တောင်ဆိုကြတဲ့အထဲမှာ ကိုဖီအာနန် တို့ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး John Paul II တို့လို ပုဂ္ဂိလ်တွေတောင်ပါလေရဲ့။နောက်ဆုံးစိတ်လျှော့လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီး မိုက်ကယ်လ်ဟာ ဆေးရုံပေါ်ရောက်သွားခဲ့တယ်။နောက် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်။
သူ့နောက်ဆုံးချိန်ထိ စုကို စိတ်ယိုင်သွားစေမယ့် စကားတွေ တခွန်းမှမဟခဲ့ သလိုအမြဲဂရုစိုက်ဖို့ စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့ တဖွဖွ မှာနေတတ်တဲ့ မိုက်ကယ်လ်။၁၉၉၉ march 27 သူ့ရဲ့ 53 နှစ်မြောက်မွေးနေ့ မနက်ခင်း ၆နာရီမှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်။သူချစ်တဲ့အမျိုးသမီး ရဲ့ ယုံကြည်ချက်ကို သေတဲ့အထိ နားလည်ပေးခဲ့တဲ့ ဒီလို ချစ်သူ ခင်ပွန်း တစ်ယောက်ပါ။
မိုက်ကယ်လ် အခြေအနေမကောင်းကြောင်း မိုက်ကယ်လ်အမွာ ညီအကို Antony ဆီက သတင်းရတော့စုဟာ တယ်လီဖုန်းကို ဆက်ဖို့ကြိုးစားတယ်။အမြဲလည်းကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် အမြဲလိုင်းဖြတ်ခံထားရတဲ့ ဖုန်းက သုံးမရခဲ့။စုလိုရင် အမြဲအကူညီပေးတတ်တဲ့ ဗြိတိသျှ သံရုံးကို သွားခဲ့တယ်။( အဲ့သည်အချိန်က မြန်မာအစိုးရဟာ စုကို ပြန်ချင်လည်းပြန်ဆိုပီး လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပေးထားတဲ့အချိန်)(အချိန်ကိုက်ရက်စက်မှု တွေထဲကတစ်ခုပေါ့)သူမှာချင်တဲ့ နောက်ဆုံးနုတ်ဆက်စကား ကို video tapeနဲ့အတူပို့ဖို့ စုဟာစီစဉ်ခဲ့တယ်။
စုပြောခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးစကားလေးက”စုအပေါ် အဆုံးစွန်ထိ နားလည်ပေးခဲ့တဲ့ ဇနီးမယားတစ်ယောက်ရဲ့ ပျက်ကွက်မှုတွေကို ခွင့်လွတ်ပေးခဲ့တဲ့ မိုက်ကယ်ကိုလေ..စုအရမ်းချစ်ပါတယ်…”တဲ့လေ။အဲ့ဒီနေ့က စုဟာ အပြာရောင်အကျီလေးနဲ့ ခေါင်းမှာ နှင်းဆီပန်းအဖြူလေးကို ပန်ထားခဲ့သတဲ့။မိုက်ကယ်လ် ဆုံးတဲ့ သတင်းကို ရတော့စုဟာ မျက်ရည်မကျခဲ့တော့ဘူး။ နောက်မှသိခဲ့ရတာကနောက်ဆုံးနုတ်ဆက်စကား ဆိုဖို့ အရုပ်ရောအသံပါရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ အခွေtape လေးဟာ သူဆုံးပြီး ၂ ရက်မှရောက်သွားခဲ့တဲ့ အကြောင်းပေါ့။
စု ဆိုတဲ့တချိန်က အမျိုးသမီးလေးဟာ ခုမြင်နေရတဲ့ သန်မာလွန်းတဲ့ အမေစု ပါလား ဆိုပီးတွေးမိတိုင်း…ဖတ်ရင်း သိပ်ခံစားရတာပဲ။ခုလို လှပမော်ကြွားနိုင်တဲ့ အချိန်ရောက်ဖို့ဘယ်လောက်တောင် စွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ် ခံစားခဲ့ရတယ် ဆိုတာတွေ တွေးမိတိုင်း. သည်ချိန်မှာတာ အမေစုကို မေးရင် ဒါ သူရွေးချယ်မှုပါ လို့ ပြုံးပြုံးလေးပြန်ပြောမှာပဲ။
သည်လိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့ သူ သိမ်းဆည်းခဲ့ရတဲ့ ခံစားချက်တွေ ဘယ်လောက်တောင်များလိုက်မလဲ ဆိုတာတော့ ကျနော်တို့ မသိနိုင်ခဲ့ပါဘူး.လေ။(စာအုပ်ဖတ်ရင်း မျက်ရည်ကျတဲ့အခိုက်တန့်ဆိုတာ တကယ်ရှိပါတယ်)” ကျမ ဘဝ အတွက် တကယ်လိုအပ်တဲ့ ” နားလည်မှု ” ဆိုတာကို တလျှောက်လုံး မညည်းမညူပေးခဲ့တဲ့ သူလိုလူကို ခင်ပွန်းတော်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ အတွက် ကျမသိပ်ကံကောင်းခဲ့ပါတယ် “တဲ့
(မွန်ဟော်စီ – ပေးဆပ်သူရဲ့ နှလုံးသားဝိဉာဉ် )စာအုပ်မှ
“ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကို သူ့ယောင်ျကြား မိုကျကယျလျ ဘယျတော့မှမပွောခဲ့ဘူးတဲ့ စကားလေးတဈခှနျး ”
“စုရေ ပွနျလာခဲ့ပါလား ” ဆိုတဲ့စကားကို မိုကျကယျလျ ဟာ ဘယျတော့မှာ မပွောခဲ့ဘူးတဲ့။အဲ့ ဒီအစား “ကိုလာမယျ ၊ ကိုယျစုဆီလာမယျ။ကိုစု နဲ့တှခေငျြတယျ ” ဖုနျးရတိုငျး ၊ စာရေးတိုငျးမှာ ပွောခဲ့သတဲ့။မိုကျကယျလျ ဟာ ကငျဆာဖွဈပီး အခွအေနမေကောငျးတော့တဲ့ နောကျဆုံးအခြိနျထိအောငျမွနျမာနိုငျငံကို ၊ အကယျြခြုပျကနြတေဲ့ စုဆီကို လာဖို့ Visa လြှောကျခဲ့တယျ။
အကွိမျ ၃၀ တိတိ ထိ လြှောကျခဲ့ပမေယျ့ မွနျမာအစိုးရက ပယျခခြဲ့တယျ။ဗီဇာပေးဖို့ တောငျဆိုကွတဲ့အထဲမှာ ကိုဖီအာနနျ တို့ ပုပျရဟနျးမငျးကွီး John Paul II တို့လို ပုဂ်ဂိလျတှတေောငျပါလရေဲ့။နောကျဆုံးစိတျလြှော့လိုကျတဲ့အခြိနျကစပွီး မိုကျကယျလျဟာ ဆေးရုံပျေါရောကျသှားခဲ့တယျ။နောကျ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ကှယျလှနျသှားခဲ့တယျ။
သူ့နောကျဆုံးခြိနျထိ စုကို စိတျယိုငျသှားစမေယျ့ စကားတှေ တခှနျးမှမဟခဲ့ သလိုအမွဲဂရုစိုကျဖို့ စိုးရိမျမှုတှနေဲ့ တဖှဖှ မှာနတေတျတဲ့ မိုကျကယျလျ။၁၉၉၉ march 27 သူ့ရဲ့ 53 နှဈမွောကျမှေးနေ့ မနကျခငျး ၆နာရီမှာ ကှယျလှနျသှားခဲ့တယျ။သူခဈြတဲ့အမြိုးသမီး ရဲ့ ယုံကွညျခကျြကို သတေဲ့အထိ နားလညျပေးခဲ့တဲ့ ဒီလို ခဈြသူ ခငျပှနျး တဈယောကျပါ။
မိုကျကယျလျ အခွအေနမေကောငျးကွောငျး မိုကျကယျလျအမှာ ညီအကို Antony ဆီက သတငျးရတော့စုဟာ တယျလီဖုနျးကို ဆကျဖို့ကွိုးစားတယျ။အမွဲလညျးကွိုးစားခဲ့ပမေယျ့ အမွဲလိုငျးဖွတျခံထားရတဲ့ ဖုနျးက သုံးမရခဲ့။စုလိုရငျ အမွဲအကူညီပေးတတျတဲ့ ဗွိတိသြှ သံရုံးကို သှားခဲ့တယျ။( အဲ့သညျအခြိနျက မွနျမာအစိုးရဟာ စုကို ပွနျခငျြလညျးပွနျဆိုပီး လှတျငွိမျးခှငျ့ပေးထားတဲ့အခြိနျ)(အခြိနျကိုကျရကျစကျမှု တှထေဲကတဈခုပေါ့)သူမှာခငျြတဲ့ နောကျဆုံးနုတျဆကျစကား ကို video tapeနဲ့အတူပို့ဖို့ စုဟာစီစဉျခဲ့တယျ။
စုပွောခဲ့တဲ့ နောကျဆုံးစကားလေးက”စုအပျေါ အဆုံးစှနျထိ နားလညျပေးခဲ့တဲ့ ဇနီးမယားတဈယောကျရဲ့ ပကျြကှကျမှုတှကေို ခှငျ့လှတျပေးခဲ့တဲ့ မိုကျကယျကိုလေ..စုအရမျးခဈြပါတယျ…”တဲ့လေ။အဲ့ဒီနကေ့ စုဟာ အပွာရောငျအကြီလေးနဲ့ ခေါငျးမှာ နှငျးဆီပနျးအဖွူလေးကို ပနျထားခဲ့သတဲ့။မိုကျကယျလျ ဆုံးတဲ့ သတငျးကို ရတော့စုဟာ မကျြရညျမကခြဲ့တော့ဘူး။ နောကျမှသိခဲ့ရတာကနောကျဆုံးနုတျဆကျစကား ဆိုဖို့ အရုပျရောအသံပါရိုကျကူးခဲ့တဲ့ အခှေtape လေးဟာ သူဆုံးပွီး ၂ ရကျမှရောကျသှားခဲ့တဲ့ အကွောငျးပေါ့။
စု ဆိုတဲ့တခြိနျက အမြိုးသမီးလေးဟာ ခုမွငျနရေတဲ့ သနျမာလှနျးတဲ့ အမစေု ပါလား ဆိုပီးတှေးမိတိုငျး…ဖတျရငျး သိပျခံစားရတာပဲ။ခုလို လှပမျောကွှားနိုငျတဲ့ အခြိနျရောကျဖို့ဘယျလောကျတောငျ စှနျ့လှတျခဲ့ရတယျ ခံစားခဲ့ရတယျ ဆိုတာတှေ တှေးမိတိုငျး. သညျခြိနျမှာတာ အမစေုကို မေးရငျ ဒါ သူရှေးခယျြမှုပါ လို့ ပွုံးပွုံးလေးပွနျပွောမှာပဲ။
သညျလိုရှေးခယျြနိုငျဖို့ သူ သိမျးဆညျးခဲ့ရတဲ့ ခံစားခကျြတှေ ဘယျလောကျတောငျမြားလိုကျမလဲ ဆိုတာတော့ ကနြျောတို့ မသိနိုငျခဲ့ပါဘူး.လေ။(စာအုပျဖတျရငျး မကျြရညျကတြဲ့အခိုကျတနျ့ဆိုတာ တကယျရှိပါတယျ)” ကမြ ဘဝ အတှကျ တကယျလိုအပျတဲ့ ” နားလညျမှု ” ဆိုတာကို တလြှောကျလုံး မညညျးမညူပေးခဲ့တဲ့ သူလိုလူကို ခငျပှနျးတျောခှငျ့ရခဲ့တဲ့ အတှကျ ကမြသိပျကံကောငျးခဲ့ပါတယျ “တဲ့
(မှနျဟျောစီ – ပေးဆပျသူရဲ့ နှလုံးသားဝိဉာဉျ )စာအုပျမှ
Previous Article မြန်မာက ကိုဗစ်ကူးစက်နှုန်း ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမြန်နေကြောင်း ထိုင်းပါမောက္ခပြော
Next Article “ ခရစ်ယာန်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာကူးပြောင်းလာသော ဦးဇင်းလေး (၂)ပါး ဖြစ်ရပ် ”